Izindaba - izizathu ezi-5 zokukhetha ukufakwa kweshubhu njengesitsha esifanelekile
Kulezi zinsuku, ukupakisha okwehlukanisiwe kuye kwasetshenziswa kwezimonyo. Futhi ukusetshenziswa kwamashubhu okukhama kukhula kakhulu. Ukuphatheka nokuguquguquka kukwenzile kwaba isitsha esifanele ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene.
Konke okudingeka ukwenze ukufaka isembozo kanye ne-squeese, uhambisane nokuqaqa isembozo sebhodlela noma ukukhipha ngaphambi kokusetshenziswa ngakunye. Okwamanje, ilula futhi iyaphatheka ukuphatha. Awudingi ukuthatha amabhodlela amakhulu / asindayo noma izimbiza.
Izimbiza zezingilazi noma amabhodlela ayathandeka, kepha ayabiza impela. Bona kanye nokupakisha kwangaphandle konke kufaka intengo yomkhiqizo.
Ngenkathi amashubhu ayindlela engabizi kakhulu. Izindleko ziphansi futhi ikhwalithi inkulu impela! Iyakhanga ngomklamo wakho oyingqayizivele.
Ukwenza kube lula kwezokuthutha
Ngokungafani namabhodlela epulasitiki noma engilazi nezimbiza, amashubhu alula kakhulu, awabuthakathaka kangako, asindisa isikhala futhi ayasebenza ekuthuthweni.
Ngoba amashubhu angakhiwa ngendlela ehlukile nangosayizi ohlukile, ngakho-ke kuyahlukahluka kuzinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene. Kusuka ku-1ml kuye ku-500ml, ilungele i-Essence, ukhilimu wesandla, i-sunscreen noma i-shampoo, ukulungisa izinwele nakho konke okubalulekile ofuna ukukuqukethe. Ngakho-ke, ukwenza izinto ezihlukahlukene kungenye inzuzo eyinhloko yokusebenzisa lezi ziqukathi zamashubhu.
Ngenxa yokuthuthuka kwezobuchwepheshe, izinto ezisetshenziselwa ukwenziwa kwamashubhu epulasitiki ziye zaba nobungani bemvelo eminyakeni edlule. Ungakhetha lawa maphakheji njengenketho enobungane.
Indaba emfushane, lezi izinzuzo zamashubhu njengeziqukathi zezimonyo. Uma ungumenzi womkhiqizo wezimonyo, siphakamisa ukuthi ucabangele ukusebenzisa amashubhu wezimonyo. Futhi umshini wethu wokugcwalisa nokuvala uphawu ungakusiza ekutholakaleni.
Ngakho-ke Xhumana nomshini we-HX manje, umphakeli wakho womshini owodwa wokupakisha futhi masikusize!